အခြားရောဂါများ Archives - Page 31 of 34 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” Drip ပုလင်းချိတ်တာ တကယ်အကျိုးရှိရဲ့လား? “ တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ဆေးခန်းအတွင်းသို့သန်သန်မာမာ လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားတစ်ဦးဝင်လာသည်။ ကျွန်တော်။ ။ လာအစ်ကို ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ လူနာ ။ ။ ဆရာကျွန်တော် ပုလင်းချိတ်ချင်လို့။ ကျွန်တော်။ ။ အော်…. အခုဘယ်လိုနေလို့လဲဗျ။ လူနာ…
အစာအိမ်အချဉ်ရည်လျှံခြင်း(သို့မဟုတ်)အစာပြွန်အချဉ်ရည်လောင်ခြင်းရောဂါ အစာပြွန်အချဉ်ရည်လောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အစာအိမ်အတွင်းရှိအစာများ၊ အချဉ်ရည်များသည် ပုံမှန်အတိုင်းအူသိမ်သို့ထွက် မသွားပဲ အဝင်လမ်းဖြစ်သော အစာပြွန်ထဲသို့ လျှံဝင်သောအခါတွင် အစာပြွန်အချဉ်ရည်လောင်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသနည်း။ အစာပြွန်နှင့် အစာအိမ်ဆက်စပ်သောနေရာရှိ အစာပြွန်အောက်ပိုင်းရှိ အထိန်းကြွက်သားကောင်းစွာမပိတ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အစာပြွန်အချဉ်ရည်လျှံခြင်း/လောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။…
ကျွန်တော့်ဆေးခန်းနှင့် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင် ကြောက်သင့်တာကို ကြောက်ပါ “ဆရာ၊ မခွဲဘူးနော် (အဲဒီလောက်ပဲ ရေးလိုက်ရင် ဆရာနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးတို့တဲ့အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေတယ်နော်) မခွဲဘူး၊ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး” “အေးပါ၊ ငါကလည်း မလိုရင် မခွဲပါဘူးဟာ။ (အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့လူနာပါ) နင်ချိုင်းမှာ ပြည်တည်နေ တယ်မဟုတ်လား” “ဆရာ ဘယ်လိုသိသလဲ၊…
ဆေးအညွှန်း၊ လူနာအညွှန်း၊ ဆရာဝန်အညွှန်း “ဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆေးက အဆိပ်တွေလားလို့ ပြန်လာပြတာ´´ ကြားလု့ိ ရုတ်တရက်လန့်သွား မိပါသည်။ အပြင်က တပည့်ကျော်စောလှဖြူကို လူနာအထဲ အမြန်လွှတ်ခိုင်းလိုက်ရသည်။´ “ဘယ်ဆေးက အဆိပ်လဲ။ ပြပါဦး´´ “ဆရာလေး၊ ခုနက ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးပုလင်းမှာ အဆိပ် (Poison) လို့ရေးထားတယ်´´…
အဖျားကြီးခြင်း အဖျားမည်မျှရှိလျှင် အဖျားအလွန်ကြီးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသနည်း။ အဖျား ၁၀၂ ထက်ပိုပါက အဖျားကြီးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်အပူချိန် ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထက်ပိုပါက အပူလွန်ကဲသည့် အဆင့်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အသက်အန္တရာယ်ရှိတတ်၏။ သတိလစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း ရေနှင့် ဓာတ်ဆားများ…
ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း နှင့် ဖျားနာခြင်း လူတစ်ဦးတွင် ကိုယ်တွင်းရှိဇီဝဖြစ်စဉ်များ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောကိုယ်အပူချိန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ •အကောင်းဆုံးကိုယ်အပူချိန်မှာ ၃၆-၃၇.၅ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ် (၉၇.၆-၉၉.၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) အတွင်းဖြစ်သည်။ •ကိုယ်အပူချိန်ကို ချိုင်းအောက်တွင် သာမိုမီတာထား၍တိုင်းတာလေ့ရှိပေသည်။ တစ်မိနစ်အပြည့် တိုင်းရပါမည်။ လျှာအောက်၊…